ဒိန်ခဲ Straw - Pico က De Gallo ဒိန်ခဲပြတ်သား
ရှေ့ဆောင်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏ Psychotic Ramblings
Dolly Parton နှင့် Carl Dean ၏ Sweet Romance အတွင်းပိုင်း
Pico က De Gallo ဒိန်ခဲပြတ်သား
ကျွန်တော့်အမေကချက်ပြုတ်ပေမဲ့ဒိန်ခဲတွေဘယ်တော့မှမထုတ်ဘူး။ သူမကသူတို့ကို Steinmart မှာဝယ်လိုက်သည်။ ဒါကြောင့်ဒိန်ခဲကောက်ရိုးတွေလုပ်ဖို့ခက်ခဲလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အမြဲထင်ခဲ့တယ်။ မဟုတ်ပါ! (ငါသည်လည်း Steinmart တွင်စျေးဝယ်သည့်အခါတိုင်းကျွန်ုပ်၏အစာအိမ်သည်တုန်လှုပ်သွားသည်ဟုထင်သည်။ )
ဒိန်ခဲကောက်ရိုးတွေကဆင်တူသည် အိမ်လုပ်ဒိန်ခဲ crackers , ဒါပေမယ့်နည်းနည်းပေါ့ပါး, အနည်းငယ်ဖုတ်မှုန့်ကျေးဇူးတင်စကား။ သူတို့ကသိသာလွန်းအနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားပုံဖော်ပါတယ်။ သူတို့ကစပျစ်ရည်ကိုတစ်ခွက်သို့မဟုတ်အအေးဘီယာနှင့်အတူမိုheaven်းကောင်းကင်ပါပဲ။ သို့မဟုတ် Ree ရဲ့ဘလက်ဘယ်ရီ Margaritas တ!
ဒိန်ခဲအတွက်, cheddar ရိုးရာဖြစ်ပါတယ်။ ငါ nuttiness တစ်နည်းနည်းနှင့်အတူ cheddar ကဲ့သို့ဒိန်ခဲဖြစ်သော Kerrygold ရဲ့ Dubliner ကိုချစ်။ လတ်ဆတ်တဲ့ Parmesan အနည်းငယ်ကိုရောစပ်ဖို့ငါလည်းကြိုက်တယ်။ Gruyere ဟာအရသာကောင်းကောင်းရလိမ့်မယ်။ သင်ကကျေးဇူးတင်နိုင်လျှင်, ဖြစ်ကောင်းဒီမှာအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
ထောပတ်သည်ဒိန်ခဲ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ သင်၌အိုင်းရစ်ရှ်ထောပတ်ကဲ့သို့အကြိုက်ဆုံးရှိပါက၎င်းသည်နေရာကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဲဒါကိုအတုံးတွေခွဲပြီးဒိန်ခဲတွေကိုကြိတ်ပါ (ဒီနေရာမှာကြိုတင်ခွဲထားခြင်းကိုမသုံးပါနဲ့)၊ သူတို့ကိုအခန်းအပူချိန်ရောက်အောင်ပို့ပေးပါ။
မုန့်ညက်ဖုတ်မှုန့်နှင့်နံ့သာမျိုးနှင့်အတူဂျုံမှုန့်။ ငါခြောက်သွေ့တဲ့မုန်ညင်း, cayenne နှင့် paprika ရောနှောအသုံးပြုသည်။ cayenne ကဒိန်ခဲကောက်ရိုးကိုအနည်းငယ်ကန်ပေးပေမယ့်သူတို့ကိုငါမစပ်ဆိုင်ဘူး။ ဆေးလိပ်မသောက်ဘဲလတ်ဆတ်သော paprika ကိုသုံးပါ။ ၎င်းသည်အရောင်အတွက်အဓိကအားဖြင့်ဖြစ်သည်။
ပုံဖော်ရန်အတွက်သင်သည် cookie ပုံနှိပ်စက်ကိုသုံးနိုင်သည်။ ငါပိုင်ဆိုင်သောကွတ်ကီးပစ္စည်းများအားလုံးတွင်ငါကွတ်ကီးစာနယ်ဇင်းကိုမသိမ်းထားပါ။ ကျွန်တော့်ဒိန်ခဲကောက်ရိုးအတွက်သူတို့ကိုလှိမ့်ချင်ပြီးပီဇာဖြတ်စက်ဖြင့်ကြိုက်သည်။ (မုန့်စိမ်းသည်ပိုက်အိတ်တစ်လုံးကိုညှစ်ရန်တင်းကျပ်လွန်းနေပြီးကျွန်ုပ်၏စကားကိုယူပါ။ )
သူတို့ကိုအနည်းငယ်လှည့်ကွက်ပေးပါနှင့် crispy သည်အထိမုန့်ဖုတ်။
ကောက်ရိုးပေါ်တွင်မည်သည့်နေရာမှမဆို ၅ လက်မမှ ၉ လက်မအထိရှိသည်။ လိမ်တဲ့အခါအဆုံးပြတ်သွားရင်ဘာမှစိုးရိမ်စရာမရှိဘူး။ ဒါဟာနည်းနည်းတိုတောင်းပါလိမ့်မယ်။
သူတို့ရဲ့ကျက်သရေ၏တစိတ်တပိုင်းမှာအားလုံးမဟုတ်ပါ။ သူတို့ကဒါ whimsical နေနှင့်အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်များအတွက်ဖန်ခွက်၌ထရပ်နေဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
ဒိန်ခဲကောက်ရိုးများသည်လေလုံသည့်ကွန်တိန်နာတစ်ခုတွင်သိုထားလိမ့်မည်။ သငျသညျကော့တေးအဘို့မိတ်ဆွေများကိုကျော်ရှိခြင်းလျှင်, သူတို့ကိုမတိုင်မီသူတို့ကိုလုပ်ပါ။ သင့် guests ည့်သည်များမရောက်မီ၎င်းတို့အားလုံးကိုမစားရန်ကြိုးစားပါ။
ဒီမှာပုံနှိပ်နိုင်သောစာရွက်ပါ ဒိန်ခဲ Straw
နေ့ 278: Lodge Update ကို
တစ်အိုး - Pesto ကြက်သား
ကလေးများနှင့်အတူ Plein Air
ဟိုတယ်ခန်းခရီး - ဟိုတယ် Bel Air၊ Los Angeles
ပြီးပြည့်စုံစွာ သင့်လျော်သော အငြိမ်းစားလက်ဆောင် စိတ်ကူး 20
နှစ်စဉ်အထူးအမှတ်တရများပြုလုပ်ရန်အကောင်းဆုံးအီစတာရိုးရာ ၂၅ ခု
အသက် 21 နှစ်အရွယ် အမျိုးသားများအတွက် ခရစ္စမတ်လက်ဆောင်များ
Angel Number 212- အဓိပ္ပါယ်နှင့် သင်္ကေတ
သင့်မိသားစုရှိ နှင်းငှက်များအတွက် မွေးနေ့လက်ဆောင် စိတ်ကူး 20
၂၅ ဤအပြင်မှာသင်၏ဝင်ပေါက်ကိုဖွင့်ပေးမည့်အကောင်းဆုံးအဆောက်အ ဦး အပြင်ဘက် Halloween အလှဆင်မှုများ
ဤ Halloween Window အလှဆင်မှုများသည်မည်မျှပျော်စရာကောင်းသနည်း။
မျောက်နှစ်အတွက် လက်ဆောင်အကြံဉာဏ် ၂၀
ရှေ့ဆောင်အမျိုးသမီး pico de gallo စာရွက်
Nancy Travis နှင့်လက်ထပ်ခဲ့သူဖြစ်သည်။
မီးခိုးရောင်၏ ခန္ဓာဗေဒတွင် lexie gray ဇာတ်ဆောင်သူ